eHimalayatimes | विचार/साहित्य | बाढीपीडितको चित्कार कसले सुन्ने ?
22nd July | 2018 | Sunday | 3:18:20 AM
बाढीपीडितको चित्कार कसले सुन्ने ?
कविता दाहाल POSTED ON : Sunday, 13 August, 2017 (5:01:50 PM)
देशका अधिकांश स्थानमा बिहीबारदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ । शनिबार र आइतबार पनि मनसुनी वर्षाको गतिविधि देशभरि नै सक्रिय हँुदा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागको पूर्वानुमान छ । देशभरमा बाढीपहिरोको कारण हालसम्म ५० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ । यो त भयो आधिकारिक रूपमा घोषणा भएको तथ्यांक, कति तथ्यांक त सञ्चार क्षेत्रमा भएको अवरोधको कारण आउन नसकेका पनि छन् । दुर्गमका बस्तिहरको तथ्यांक आएकै छैन । सबै क्षेत्रमा संचार विच्छेद्को अवस्था छ ।
सप्तकोशी ब्यारेजमा पानीको वहाव दुई लाख ८३ हजार क्युसेक प्रतिसेकेन्ड मापन गरिएको छ । वहाब अझै बढ्दै गइरहेको सुनिएको छ । यदि कोशी यसरी नै थुनिरहे त्यहाँका बासिन्दाको जनजीवन कस्तो होला ? हाम्रो देशमा रहेको कोशीको ढोका खोल्न भारतलाई सोध्नुपर्ने, यो कस्तो नियति हो ? राजनीतिक रूपमा मात्र होइन प्राकृतिक प्रकोपमा पनि हामी भारतमुखी हुनु परेको छ । कसका कारण यसो भइरहेको छ ?
सम्पूर्ण तराई बाढीले तहसनहस भएको छ । सरकार भने एउटा मन्त्रीपरिषद्को मिटिङ टाक्न पनि साँझ कुरेर बसेको छ । जब राति हुन्छ तव सायद संकटकालको घोषणा गर्ने होला । चार दिन देखि लगभग तराई मधेस डुबेको सरकारले देखेन । सरकार को हो ? के थाहा विचारा पानीमा तैरिदैं गरेका अवोध बालबालिका, बृद्धवृद्धालाई । जब बहसबाट तराई बाहिर गयो अनि साँझ पारेर मिटिङ कल गरेको छ । आपतकालिन स्थितिमा सकिन्छ आफैं बाढीमा फसेका जनतालाई उद्धार गर्नुपर्ने हो सकिन्न क्षमता बाहिरको भए विदेशी उद्धार टोली झिकाउन किन तत्पर छैन सरकार ? विकशित देशका विकशित प्रकारका रेस्क्यू गर्ने सम्यत्र होलान् । जतिसक्दो चाँडो आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरि छिमेकी राष्ट्रबाट उद्धार टोली झिकाउन पहल गर्नु पर्यो । मधेस चुर्लम्म डुबिसक्यो । बालबच्चा बुढापाकाको अवस्था कस्तो भएको होला ? कत्ति पनि दया भन्ने चिज नभएझैं भएका छौ हामी । अझ सोमबार सम्म भारी बर्षा हुन सक्ने पुर्वानुमान छ । कोशी, गण्डक, राप्ति लगायतका ठूला नदिको बहाव बढी रहेको छ । कोशीले पहिला जस्तै बाँध फूटाएर वितण्डा मच्चायो भने कति धनजनको क्षति होला ? भलै त्यसो नहोस् कामना बाहेक के गर्न सकिन्छ र ? चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले कोशीको अरु ढोका खोल्न पहल गरोस् । कुननीति बढाएर ठूलो क्षति हुनबाट जोगायोस् ।
कोशीमा शनिबार दुई लाख ५० हजार क्युसेकमाथि गएपछि खतराको संकेतस्वरूप कोशी ब्यारेजमा रातो बत्ती बालिसकिएको र रातो झण्डा फहराइएको छ । वहाब तीन लाखमाथि क्यूसेक प्रतिसेकेन्ड भएपछि पूर्ण खतरा मानिन्छ । अझै भारतीय पक्षको मुख ताकिरहेको छ नेपाल सरकार ।
देश अविरल वर्षा अर्थात् प्राकृतिक प्रकोपले क्षतविक्षत भएको अवस्थामा कोही भने डा. केसीका मागको समर्थनमा राजधानीको सडकमा नारा लगाउनमा व्यस्त हुनु परेको छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको झैं देखिन्छ । संजोगवश बाँचेकाहरुले पानी समेत खान नपाएको खवरहरु प्राप्त भएको छ । पानीका कल, ट्यूवेलहरु बाढीले पूरिएका छन् । अन्य खानेपानीको श्रोत छैन । खाद्यान्नको अभाव त उति नै छ । राहतको लागि खासै पहल हुन सकेको छैन ।
बाढी पहिरोले मुलुक छियाछिया हुन लागेको परिस्थितिलाई बेवास्ता गरी कोही भने फेसबुकमा सस्ता र बेमौसमी ट्यागलाई पोष्ट गर्नमै व्यस्त छन् । फेसबुकमा पानी परेर रमाइलो भयो भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।
काहीँ भएको सडक पनि बाढीले बगाएर वारपार गर्न सक्ने अवस्था छैन । सडक यातायात पूर्णरूपमा बन्द छ । परिवारलाई सम्पर्क गर्ने सञ्चार माध्यम टुटेको छ, कतिपयले परिवारका सदस्य गुमाइसकेका छन्, काहीँ सडकमै धर्ना दिएर बसेका छन् सम्बन्धित निकाय भने कहाँबाट चियाएर हेर्दैछ । बिचरा हामी जनताको हालत कहिलेसम्म यो अवस्था टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? साच्चै नै सतीले सरापेको देश भन्ने चरितार्थ हुन लागेको छ ।
बुधबारदेखि लगातारको अत्यधिक वर्षाका कारण देशको पूर्वी भाग डुबानको कारण जोखिममा रहेको छ , सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । निर्देशनमै आशा गर्नु सिवाय अरू के नै छ र बाढीपीडितसँग ?